SysStat, fitaovana hanaraha-maso ny rafitra Ubuntu | Ubunlog
SysStat, fitaovana hanaraha-maso ny rafitra Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery SysStat isika. Ity dia fitambarana fitaovana azonay ampiasaina manara-maso ny rafitray, izay loharano misokatra ihany koa ary maimaim-poana. Amin'ny alalan'ireo fitaovana ireo dia afaka mamaha ny olan'ny fampandehanana amin'ny rafitra Gnu/Linux isika, ahafahantsika mahita ny angon-drakitry ny rafitra amin'ny fotoana tena izy, na mamakafaka ny angon-drakitra azon'ireo fitaovana ireo.
Tsotra ny fametrahana azy. Amin'ireto andalana manaraka ireto dia ho hitantsika tsikelikely ny fomba hanatanterahana ny fametrahana ity fitaovana ity amin'ny Ubuntu 20.04. Ny torolàlana fametrahana dia azo arahina amin'ny dikan-teny hafa amin'ny Ubuntu sy ny fizarana hafa mifototra amin'ny Debian toy ny Linux Mint.
1 Sysstat General Features
2 Mametraka SysStat amin'ny Ubuntu 20.04 LTS
Sysstat General Features
Azonao aseho anay ny sandan'ny statistika antonony amin'ny faran'ny tatitra.
Manana ny mety ho mahita fitaovana vaovao amin'ny lalitra (disks, interface tsara, sns ...) izay noforonina na voarakitra mavitrika.
Mifanaraka amin'ny milina UP sy SMP, ao anatin'izany ny milina misy processeur multi-core na hyper-processing.
Fanohanana Hotplug CPUs (dia mahita ho azy ireo processeur izay kilemaina na mandeha an-tongotra) ary CPUs tsy misy kilema.
Miasa amin'ny 32-bit na 64-bit architectures.
mila kely loatra ny fotoana CPU handehanana.
Ny antontan'isa momba ny rafitra nangonin'ny sar / sadc dia azo tehirizina ao anaty rakitra ho fitsirihana ho avy. Mamela anao hanitsy ny faharetan'ny tantaran'ny angona izay hotehirizina. Tsy misy fetra ny faharetan'ity tantara ity, fa ny habaka misy ao amin'ny fitahirizanay.
Antontan'ny rafitra nangonin'ny sar / sadc azo aondrana amin'ny endrika maro samihafa (CSV, XML, JSON, SVG, sns ...).
iostat afaka mampiseho antontan'isa momba ny fitaovana voatanisa.
endri-javatra smart loko output hanamora ny famakiana ny antontan'isa.
Sysstat manana voadika amin'ny fiteny maro samihafa.
Ny baiko Sysstat dia afaka safidio ho azy ny fitaovana ampiasaina hanehoana habe mba ho mora vakina.
Afaka mamorona sary (endrika SVG) ary asehoy ao amin'ny navigateur web ankafizinay.
Sysstat dia rindrambaiko maimaim-poana / open source ary azo alaina maimaim-poana eo ambanin'ny GNU General Public License, version 2.
Ny kinova farany an'ny Sysstat dia azo jerena ao amin'ny tranokalan'ny mpamorona.
Ireto dia sasany amin'ireo endri-javatra amin'ny programa fotsiny. Afaka izy ireo manatona azy rehetra amin'ny antsipiriany avy ao amin'ny tahiry GitHub an'ny tetikasa.
Mametraka SysStat amin'ny Ubuntu 20.04 LTS
Afaka mahita an'io fitaovana io isika azo jerena ao amin'ny repositories Ubuntu. Noho izany, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny fanavaozana ny rindrambaiko azo alaina avy amin'ny repository. Afaka manao izany isika amin'ny fanokafana terminal (Ctrl + Alt + T) ary manatanteraka ny baiko ao anatiny:
Avy eo dia afaka mametraka SysStat ao amin'ny Ubuntu 20.04 isika. Araka ny nolazaiko, ity fitaovana ity dia hita ao amin'ny tranokala Ubuntu, noho izany Afaka mampiasa APT isika amin'ny fametrahana. Ilaina ihany ny manoratra amin'ny terminal iray ihany:
Aorian'ny fametrahana dia hanao izany izahay Manaova fanitsiana kely indrindra ilaina amin'ny SysStat miasa tsara. Amin'ny alàlan'ny default, ny fanaraha-maso an'ity fitaovana ity dia kilemaina, ka tsy maintsy manao izany isika avelao ny fanaraha-maso SysStat. Azontsika atao izany amin'ny alàlan'ny fanovana ity rakitra manaraka ity:
Eto ihany isika dia tsy maintsy apetraho ENABLED ho marina:
Ny dingana manaraka dia ny mamonjy sy manidy ny rakitra. Izao sisa no sisa avelao ny serivisy SysStat ary atombohy amin'ny fampandehanana:
Rehefa manomboka ny serivisy dia afaka mampiasa ny fitaovana izahay hanaraha-maso ny fahombiazan'ny rafitra sy ny hetsika fampiasana. Inona koa, Ny Sysstat dia misy fitaovana azonao atao amin'ny alalan'ny cron na systemd mba hanangonana sy hamoronana tantara momba ny angon-drakitra momba ny asa sy ny asa.. Ireo fitaovana rehetra ireo dia azo jerena ao amin'ny tahirin-kevitra azo alaina avy amin'ny tranokalan'ny tetikasa.
Para esory ao amin'ny rafitray ity fampiharana ity, ilaina ihany ny manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary manatanteraka ny baiko ao aminy:
Ho fanampiana na fampahalalana mahasoa momba ny fampiasana ireo fitaovana ireo dia afaka ny mpampiasa jereo ny vaovao navoaka tao amin'ny Repository GitHub na ao amin'ny tranokalan'ny tetikasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » SysStat, fitaovana hanaraha-maso ny rafitra Ubuntu
Linux 5.16-rc6 dia mbola mangina, fa mbola mieritreritra momba ny RC faha-XNUMX
Tonga ny Enlightenment 0.25 miaraka amin'ny famolavolana singa isan-karazany, fanatsarana ary maro hafa